थामियो शेयर बजार, नेप्से १.६४ बिन्दुले उकालो लागेर एक हजार ३ सय ३९ बिन्दुमा
काठमाडौँ, ३ जेठ लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार बिहिबार भने थामिएको छ । थामिएको बजार १.६४ बिन्दुले उकालो लागेर एक हजार ३३९.६५ बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार बिहिबार ‘क’ वर्गका शेयर कारोबारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.२३ बिन्दुले बढेर २८२.३० बिन्दुमा पुगेको छ । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता प्रक्रिया सहज..
एक सातापछि नेप्से हरियो, ४ अंकले बढेर १ हजार ३ सय ३८ अंकमा कायम !
काठमाडौँ, जेठ २ एक साताको अन्तरालपछि नेप्सेले हरियो अंक देखाएको छ। बैशाख २४ गतेयता नेप्से निरन्तर रातो अंकमा रहँदै आएको थियो। बुधबार ४ अंकले बढेर १३३८ अंकमा कायम भएको छ। कारोबार खुलेको आधा घण्टासम्म रातो अंकमा देखिए पनि त्यसपछिको अन्तिम समयसम्म नेप्से हरियो रह्यो । यस दिन कारोबार रकममा केही सुधार आएको छ। अघिल्लो दिन १४ करोड ९२ लाखको कारोबार भएकोमा यस दिन..
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, दश अंकले ओर्लिएर नेप्से १ हजार ३ सय ३८ अंक कायम
काठमाडौँ. बैशाख ३१ सोमबार नेप्से दश अंकले झरेको छ। १०. २८ अंकले ओर्लिएर नेप्से १३३८ मा कायम भएको छ। १६३ कम्पनीको ४२ करोड ५१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस दिन होटल, उत्पादन र अन्यबाहेकका समूह घटेका छन्। होटल ८, उत्पादन २५ तथा अन्य समूह ३ अंकले बढे। बैंकिङ १०, व्यापार २, विकास बैंक २६, जलविद्युत १५, फाइनान्स ७, बिमा ६९ तथा माइक्रोफाइनान्स..
रैराङ हाइड्रोपावरद्धारा शेयर निष्कासन, सर्वसाधारणले लाभ लिन सक्ने !
पाँचथर, ३१ वैशाख रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरेको छ । सर्वसाधारणका लागि आठ लाख ४० हजार कित्ता शेयर निष्कासन गरिएको कम्पनीका प्रमुख कुवेरमणि नेपालले जानकारी दिए । शेयर वैशाख ३१ देखि जेठ ३ गतेसम्मका लागि खुल्ला गरिएको हो । सी आश्वामा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस कम्पनीको न्यूनतम ५० कित्ता तथा अधिकतम चार हजार २०० कित्ता..
सेयर बजारका सबै सूचक ओर्लिए, नेप्से ७ तथा सेन्सिटिभ इन्डेक्स १ अंकले घट्यो !
एजेन्सी, बैशाख २७ साताको अन्तिम दिन सेयर बजारका सबै सूचक ओर्लिएका छन्। नेप्से ७ तथा सेन्सिटिभ इन्डेक्स १ अंकले ओर्लिए। त्यस्तै बैंकिङ उपसमूह ३, व्यापार ५, होटल ३१, विकास बैंक ५, जलविद्युत २५, फाइनान्स २, बिमा ६९, अन्य ६ र माइक्रोफाइनान्स १४ अंकले घटेका छन्। १६१ कम्पनीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भयो। कारोबारका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रह्यो। उसको..
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, नेप्से बढेर १३६१ अंक कायम
काठमाडौँ, बैशाख २५ सेयर बजारको परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा १५ अंकले बढेको छ। सो अंकको वृद्धिसँगै नेप्से १३६१ अंकमा कायम भएको छ। अघिल्ला दुई दिनसम्म नेप्से घटेपछि सस्तो मूल्यमा सेयर उठाउनेहरु सक्रिय भए। जसले गर्दा नेप्सेसँग कारोबार रकम पनि बढेको छ। कारोबार सुरु भएको तीन घण्टासम्म स्थिरजस्तै रहेको नेप्से अन्तिम १ घण्टामा उकालो लागेको हो। बुधबार राजधानीमा हुने पुँजी बजार एक्स्पोमा अर्थमन्त्रीले सेयर..
काठमाडौँ, २४ वैशाख : चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रु पाँच लाख ४० हजार कित्ता साधारण शेयर(आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ । रु एक सय मूल्य अंकित दरको रु पाँच करोड ४० लाख बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको सो संस्थाले आज प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संस्थाको अधिकृत पूँजी रु ३० करोड,..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, १२ अंकले ओरालो लागेर एक हजार ३ सय ५३ अंकमा !
काठमाडौँ, बैशाख २३ सेयर बजारको परिसूचक नेप्से आइतबार १२ अंकले झरेको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै रातो अंकमा रहेको नेप्से अन्तिम समयसम्म मन्द गतिमा झरेर १३५३ अंकमा कायम भयो। यस दिन कारोबार पनि बढ्न सकेन। १६० कम्पनीको ३६ करोड १६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। फाइनान्स समूह १ अंकमुनि हरियो रहयो भने अरु सबै समूह घटेका छन्। बैंकिङ ११, होटल ३१, विकास बैंक १३,..
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, नेप्से बढेर १३६० अंकमा कायम !
काठमाडौं, बैशाख १९ अघिल्ला दुई दिन कारोबार बन्द रहेको सेयर बजार बुधबार भने दोहोरो अंकले बढेको छ। ११ अंकले नेप्से बढेर १३६० अंकमा कायम भएको छ। कुल १५८ कम्पनीको ३८ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। क वर्गका कम्पनीको मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स २ अंकले बढ्यो। बिमा समूहमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सो समूह १०७ अंकले बढेको छ। त्यस्तै माइक्रोफाइनान्स ४६, अन्य १६,..
फेरी घट्यो शेयर बजार, नेप्से ८.२१ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार ३ सय ४९ बिन्दुमा
काठमाडौँ, १६ वैशाख गत सातादेखि नै निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आइतबार पनि आठ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जकाअनुसार नेप्से परिसूचक ८.२१ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार ३४९.०१ बिन्दुमा पुगेको हो । यस्तै ‘क’ वर्गका शेयर कारोबारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत २.१ अंकले घटेर २८४.९६ बिन्दुमा पुगेको छ । कूल १६१ कम्पनीको नौ लाख ६६ हजार ८२९ कित्ता शेयर रु ४०..
शेयर बजारमा ४ अर्ब बढीको कारोबार, कारोबार रकम गत साताको भन्दा १४.८६ % ले माथि
काठमाडौँ, १५ वैशाख : धितोपत्र बजारमा यस साता रु चार अर्ब ६९ करोड ६१ लाख ७९ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका अनुसार यस साता कूल १८२ कम्पनीको एक करोड एक लाख ८५ हजार कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएको हो । कारोबार रकम गत साताको भन्दा १४ दशमलव ८६ प्रतिशत बढी हो । गत साता १८१ कम्पनीको रु चार..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, २९.२५ अंकले ओरालो लागेर एक हजार ३५७ बिन्दुमा !
काठमाडौँ, १३ वैशाख शेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । लगातार घट्दै आएको बजार बिहिबार २९.२५ अंकले ओरालो लागेर नेप्से परिसूचक एक हजार ३५७ बिन्दुमा आइपुगेको हो । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ६.०६ बिन्दुले कमी आई २८७.०६ बिन्दुमा आइपुगेको छ । कूल १५९ कम्पनीको १३ लाख ३८ हजार ७३७ कित्ता शेयर रु ६३ करोड ८४ लाख ४३ हजार..
काठमाडौँ, ११ वैशाख शेयर बजारमा मंगलबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार १५.९९ बिन्दुले ओरालो लागेर नेप्से परिसूचक एक हजार ३९४ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ३.४२ बिन्दुले ओरालो लागेर २९४.६२ बिन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार कूल १७० कम्पनीको १७ लाख १९ हजार ८०० कित्ता शेयर रु ७३ करोड ९२..
दोहोरो अंकले ओरालो लाग्यो शेयर बजार, २७.६४ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार ४१० बिन्दु कायम्
काठमाडौँ, १० वैशाख शेयर बजार सोमबार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबार ५० अंकले बढेको बजार सोमबार भने २७.६४ बिन्दुले ओरालो लागेर नेप्से परिसूचक एक हजार ४१० बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ६.०७ बिन्दुले ओरालो लागेर २९८.०४ बिन्दुमा झरेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार सोमबार कूल १७० कम्पनीको ३१ लाख १४ हजार ६१८ कित्ता..
काठमाडौं, बैशाख ९ साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ५० दशमलव १८ अंकले बढेको छ । अघिल्लो साता ११० अंकले बढेको नेप्सेमा नयाँ वर्षको दोस्रो साता पनि उत्साह छाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक अवधिको वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न थालेको प्रभाव आइतबारको सेयर बजारमा देखियो । बजारमा लगानीकर्ताको बाक्लो उपस्थिति सहित भएको उच्च कारोबारको निरन्तरताले अन्तिम क्वार्टरमा..
काठमाडौं ७, बैशाख : यो साता सेयर बजारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। पाँच दिनको अवधिमा १०८ अंकले नेप्से बढेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार १२८० अंकमा रहेको नेप्से अन्तिम दिन बिहीबार १३८८ अंकमा पुगेको छ। अघिल्लो साताको तुलनामा भने ११० अंकले नेप्से बढेको हो। अघिल्लो साता बन्द हुँदा नेप्से १२७७ अंकमा थियो। यस साता कारोबार भएका पाँचै दिन नेप्से हरियो अंकमा रह्यो।..
दोहोरो अंकले बढ्यो शेयर बजार, ३१.८३ अंकले वृद्धि भई कारोबारमा व्यापकता !
काठमाडौँ, ५ वैशाख नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा बुधबार ३१.८३ वृद्धि भई कारोबारमा व्यापकता आएको छ । दोहोरो अंकको वृद्धिसहित रु एक अर्ब १२ करोड ६७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेकाअनुसार १० वटै उपसमूहमा कारोबार रकम अधिकरुपमा बढेको छ । बुधबार१६५ कम्पनीमध्ये १२२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ३६ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । सात कम्पनीको शेयर..
नेप्से दोहोरो अंकले बढ्यो, अघिल्लो दिनको तुलनामा ३९ करोड रुपैयाँ बढि कारोबार !
काठमाडौं, ४ वैशाख मंगलबार शेयर बजारको परिसुचक नेप्से ३३ अंकले बढेको छ। यस दिन १६६ कम्पनीको ९६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यो कारोबार अघिल्लो दिनको तुलनामा ३९ करोड रुपैयाँले बढि हो। यस दिन ब्यापार ५ अंकले घटे बाहेक सबै उपसुचकहरु बढेका छन्। बैंकिङ १२, होटल ८६, बिकास बैंक ३५, जलविद्युत ४०, फाइनान्स ८, बीमा ३६०, उत्पादन ५४, अन्य..
शेयर किन्न र बेच्न अब दलालकोमा धाउन नपर्ने, दर्तामा रहेका ब्रोकरको संख्या पचास !
काठमाडौँ, २ वैशाख नेपालमा पनि इन्टरनेटमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न आदेश दिन सक्ने प्रणालीको अभ्यास शुरु भएको छ । क्रिस्टल कञ्चनजंगा सेक्युरिटी प्रालिमा आइतबार आयोजित समारोहमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले उक्त प्रणाली शुभारम्भ गरेका हुन् । यो प्रणाली प्रारम्भसँगै शेयर लगानीकर्ताले शेयर खरिद बिक्रीका लागि ब्रोकर कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अब अन्त्य भएको छ । छिट्टै पूर्ण स्वचालित शेयर खरिद बिक्री..
काठमाडौँ, १८ चैत : रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको सिमित साधारण शेयर(आइपिओ)को बाँडफाँड भएको छ । दुवै आयोजनाका प्रमुख तथा बिक्री प्रबन्धकको उपस्थितिमा शेयर बाँडफाँड गरिएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र संस्थापक कम्पनीका लगानीकर्तालाई संयुक्त रुपमा आइतबार शेयर बाँडफाँड गरिएको हो । रसुवागढीले सञ्चयकर्तालाई खुला गरेको एक करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता शेयरमा एक लाख ८७..
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, नेप्से परिसूचक २४.०५ अंकले ओरालो लागेर एक हजार १ सय ९६.२४ बिन्दुमा
काठमाडौँ, १८ चैत धितोपत्र बजारमा आइतबार शेयरको मूल्य दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्चेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २४.०५ अंकले ओरालो लागेर एक हजार १९६.२४ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका शेयरको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ५.१९ बिन्दुले ओरालो लागेर २५५.६९ बिन्दुमा पुगेको छ । आइतबार कूल १५७ कम्पनीको १२ लाख ८३ हजार १३ कित्ता शेयर रु ३१ करोड २३ लाख ९४..
रसुवागढी हाइड्रो र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको 'आइपिओ बाँडफाँट' यही आइतबार हुँदै
काठमाडौँ, १६ चैत : रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको सीमित साधारण शेयर (आइपिओ)को बाँडफाँट आइतबार हुने भएको छ । रसुवागढी कम्पनीका प्रमुख माधव कोइरालाले आइतबार कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र संस्थापक लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारीलाई साधारण शेयर एकै पटक बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । दुवै कम्पनीले पहिलो चरणमा सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र दोस्रो चरणमा संस्थापक लगानीकर्ता समूहका कर्मचारीलाई..
दोहोरो अंकले बढ्यो शेयर बजार, उकालो लागेर १ हजार २ सय २० बिन्दु कायम
काठमाडौँ, १५ चैत निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज भने दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १५.४८ बिन्दुले उकालो लागेर १ हजार २ सय २० बिन्दुमा पुगेको हो । सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको र त्यसमा धितोपत्रको विषयसमेत समेटिने खबर सार्र्वजनिक भएपछि नेप्से परिसूचक उकालो लागेको अनुमान गरिएको छ । स्कटका अनुसार बिहिबार..
शेयर बजार ओरालो लागेकोप्रति काँग्रेसको चिन्ता, वाम गठबन्धनका दलहरुले जिम्मा लिनुपर्ने !
काठमाडौँ, १५ चैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा शेयर बजार केही दिनदेखि नियमित ओरालो लागेको सम्बन्धमा छलफल भएको छ । वाम गठबन्धन दलहरुले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको नारा दिएर सरकार गठन गर्ने बेला शेयर बजारको अवस्था ओरालो लागेकोप्रति काँग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बेले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई..
मंगलबार बढेको शेयर बजार बुधबार २.९० अंकले घट्यो, ‘क’ वर्गका कम्पनीका शेयर झर्दै २५७.४८ बिन्दुमा
काठमाडौँ, १४ चैत निरन्तर उतारचढावमा रहेको शेयर बजार बुधबार २.९० अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मंगलबार ३९.१६ बिन्दुले बढेको थियो भने सोमबार ५२ अंकले ओरालो लागेको थियो । नेप्सेका अनुसार ‘क’ वर्गका कम्पनीका शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकमा ०.२६ अंकले ओरालो लागेर २५७.४८ बिन्दुमा पुगेको छ । बुधबार कूल १६२ कम्पनीको १३ लाख ५२ हजार ३३० कित्ता शेयर रु ५१..
चितवनमा शेयर दलाल कम्पनी खुलेपछि कारोबार गर्न सहज, लगानीकर्ता दङ्ग
चितवन, १४ चैत : गीतानगरका ध्रुवराज पोखरेल कुनै बेला बिहान काठमाडौँ गएर शेयर कारोबार गरेर साँझ घर फर्कन्थे । उनले स्मरण गरे “दलाल कम्पनी थिएनन्, बाहिर उभिएर हामी कारोबार गथ्यौँ । बिहान चार/पाँच बजेतिर माइक्रो बस चढ्यो भने ११ बजे काठमाडौँ पुगिन्थ्यो । मध्याह्न १२ बजेदेखि तीन बजेसम्म शेयर कारोबार हुन्थ्यो । त्यसपछि गाडी चढेर घर आइन्थ्यो ।” अहिले पोखरेलको घरबाट..
शेयर बजार ३९ अंकले बढ्यो, व्यापार उपसूचकबाहेक अरु सबै उपसूचक उकालो लाग्यो
काठमाडौँ, १३ चैत सोमबार ५२ अंकले ओरालो लागेको शेयर बजार मंगलबार थामिएर ३९.१६ बिन्दुले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार ‘क’ वर्गका कम्पनीका शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ८.०९ बिन्दुले बढेर २५७.७४ बिन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार कूल १६६ कम्पनीको १५ लाख ११ हजार ६४० कित्ता शेयर रु ५० करोड ६१ लाख २६ हजार मूल्यमा कारोबार भएको छ । व्यापार उपसूचकबाहेक अरु सबै..
काठमाडौँ, १२ चैत धितोपत्र बजार सोमबार करिब ५२ अंकले ओरालो लागेको छ । बजार खुलेलगत्तै तीन प्रतिशतको दरले बजार ओरालो लागेपछि नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले ‘सर्किट ब्रेक’ नै लगाउनु परेको थियो । बजार नराम्ररी आरालो लागेपछि लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ । नेप्से परिसूचक ओरालो लागे पनि कारोबार रकम भने सोमबार ४७ करोड ३३ लाख ९५ हजार ४११ को भएको छ । सोमबार कूल १५७..
शेयर बजार : एक अर्ब ७२ करोडको ४६ लाख बढी कित्ता शेयर कारोबार
काठमाडौँ, १० चैत : धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब ७२ करोड पाँच लाख २८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार कूल १७३ कम्पनीको ४६ लाख दुई हजार ६३० कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३२.९९ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७४ कम्पनीको ३३ लाख ३९ हजार १६० कित्ता..
काठमाडौँ, ८ चैत लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार बिहिबार पनि दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बिहिबार नेप्से परिसूचक १०.६३ बिन्दुले ओरालो लागेर एक हजार २२०.४४ बिन्दुमा आइपुगेको छ । यो हालसम्मकै न्यून गिरावट हो । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत १.९९ बिन्दुले ओरालो लागेर २६०.४१ बिन्दुमा पुगेको छ । बिहिबार कूल १५८ कम्पनीको..
Results 589: You are at page 17 of 20